Valim-pifidianana solombavambahoaka Biraom-pifidianana vitsy nofoanana ny vokatra
Mpanohitra sy mpitondra Mpiara-miasa fa tsy mpifahavalo, hoy ny CFM
Manoloana ny tsy fandraisan’anjaran’ny antoko Tiako i Madagasikara tamin’ny fandaniana ny sata mifehy ny mpanohitra sy ny mety hitranga aorian’izany dia nilaza ny fahitany ny toe-draharaha ny filoha lefitry ny komitin’ny fampihavanana malagasy na CFM,
Mpitondra fanjakana « Hahita afaka 5 taona… »
Nahagaga ny nivoahan’ny depiote TIM tamin’ny fifidianana lehiben’ny mpanohitra teny Tsimbazaza satria raha tsy diso aho dia 100%,
Fiainam-pirenena Variana amin`ny adilahy politika ny maro
Ny politika amin`ny ankapobeny dia tsy misy “adilahy” fa fombany io. Misy no tsy mitovy hevitra ary lojika raha misy ny adihevitra politika.
Hafa mihitsy i Madagasikara Ny fitondrana indray no manohitra ny mpanohitra....
Hafa mihitsy ny politika eto Madagasikara fa mitsimbadika ambony ambany.
Fitantanana ny firenena Mahatsiaro atao an-jorom-bala ny zanak’i Toamasina
Efa nanao antso avo ny fikambanana Adopt ny teo momba ny fanaovana an-jorom-bala ny zanak’i Toamasina, indrindra ireo mpiasam-panjakana sy ireo avara-pianarana.
Lalàna Brunelle Fasan'ny demokrasia
Adihevitra tsy vita ny tolo-dalàna 01-2019/PL Razafitsiandraofa Jean Brunelle nanovana ny lalàna mifehy ny fanoherana sy ny antoko mpanohitra, izay efa nolanian’ireo depiote mpomba ny fitondrana.
Fitsinjaram-pahefana Afaka mahavita tena ireo vondrom-paritra raha…
Maro ireo vahaolana azo eritreretina amin`ny fametrahana ny tena fitsinjaram-pahefana.
Nisy ny fijeren’ny HCC ny fitoriana miisa 684 ny 29 mey ka hatramin’ny 18 jona 2019 raha ny nambara, saingy vitsivitsy ihany no tena nandraisana fanapahan-kevitra rehefa tena dinihina. Tsy nampiova firy ny vokatra.
Nofoanana ny voka-pifidianana tamina toerana maromaro, izay tsy ny vokatra manontolo fa tamina biraom-pifidianana tena nahitana olana tamin’ny ankapobeny. Isan’izany ny tao Analalava izay nanaovan’ny sampana mpanisa vato fitanana an-tsoratra fa nisy tsy fahatomombanana mikasika ny birao fandatsaham-bato iray tao Ambatomainty kaominina Bejofo, taorian’ny nahitana fa nisy ny fampiasana sarin-tsoratra bileta tokana miisa 48, tsy voasonian’ny mpikambana ao amin’ny biraom-pifidianana, nomena ny kandida laharana faha-2. Nofoanana ny vato miisa 48 azon’ny kandida laharana faha-2 tamin’ny tsy ara-dalàna. Vato 100 an’io kandida io ihany koa ny foana tao Andrevorevo any Analalava ihany. Toe-javatra hafa ihany koa ny fisiana fitanana an-tsoratra tsy tomombana miisa dimy nalefan’ny Sampana mpanisa vato, koa tsy misy vokatra manan-kery tamin’ireto birao fandatsaham-bato iray avy tamin’ireto toerana ireto : Ambohipato Ambilobe; EPP Ambatomily Ambilobe ; Ambohidaza Ifanadiana, Andrafiabe Maintirano ; Tsararano Mampikony, EPP Tsimikaboke Ambovombe Androy,…